मोटरसाइकलमा जोर–बिजोर : एकातिर नजर, अर्कोतिर निशाना – Khabar Silo
मोटरसाइकलमा जोर–बिजोर : एकातिर नजर, अर्कोतिर निशाना
Posted on June 16, 2020 Author khabar silo Comment(0)
काठमाडौँ । सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णयसँगै निजी सवारी साधनका लागि जारी गरेको जोर–बिजोर प्रणालीले प्रारम्भिक दिनमा अन्योल सिर्जना ग¥यो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले निजी सवारी साधनमा जोर–बिजोर लागू गर्ने निर्णय गरे पनि मोटरसाइकलमा उक्त नियम लागू हुने कि नहुने भनेर किटान गरेन । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा साइकल र मोटरसाइकलमा चालकमात्र रहने गरी सञ्चालनको व्यवस्था गरेको थियो भने निजी सवारी मोटरसाइकलमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू हुने कि नहुने भन्नेबारे प्रष्ट नहुँदा स्थानीय प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी र सर्वसाधारणमा समेत अन्योल देखियो ।
सर्वत्र अन्योलका बीच दुई दिनपछि सरकारले मोटरसाइकलमा पनि जोर–बिजोर प्रणाली लागू भएको प्रष्टिकरण दियो । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभएको यो अवस्थामा कार्यालयहरु खोल्ने निर्णय भइसकेका कारण पनि यातायातका लागि मोटरसाइकल सञ्चालनले कर्मचारीहरु (सरकारी र निजी)लाई कार्यालय आउजाउ गर्न सहज देखिन्थ्यो । सेवाग्राहीलाई पनि कार्यालयसम्म पुगेर आफ्नो काम सम्पन्न गराउनका लागि मोटरसाइकल अहिलेको सन्दर्भमा सुरक्षित र भरपर्दो सवारी साधन बनेको छ । त्यसमा पनि मोटरसाइकलमा दुई जना बस्न नपाउने नियमले कोरोना संक्रमण सर्न सक्ने दृष्टिले जोखिमरहित तुल्याएकै थियो ।
तर पनि सरकारले मोटरसाइकललाई किन जोर–बिजोर प्रणालीमा सामेल ग¥यो ? आम सर्वसाधारणले बुझ्न नसक्नु स्वाभाविक हो ।
एकातिर नजर, अर्कोतिर निशाना
जानकारहरुका अनुसार अहिलेको सन्दर्भमा मोटरसाइकललाई जोर–बिजोर प्रणालीमा बाँधिरहनुको अर्थ नै छैन । कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्ने उद्देश्यले अन्य व्यवस्था लागू गरिएकै छ । अहिलेको परिस्थितिमा त्यसै पनि एउटा मोटरसाइकल चालक अनावश्यक रुपमा बजार निस्कन हच्किन्छ । दैनिक ३/४ सयको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएको अवस्थामा बजारमा अनावश्यक निस्कनु आफ्नो लागि आफैले जोखिम निम्त्याउनुजस्तै हो भन्नेमा सायदै कसैमा विमति होला ।
तर पनि सरकारले सडकमा मोटरसाइकलको चाप आधा घटाउने गरी जोर–बिजोर प्रणालीमा यसलाई आवद्ध गरेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले एकातिर नजर र अर्कोतिर निशाना लगाउँदै मोटरसाइकलमा पनि जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरेको हो ।
पछिल्ला दिनमा देशव्यापी रुपमा सरकारविरुद्ध युवाहरु सडकमा निस्किएका छन् । मोटरसाइकल भनेकै युवाको रुचीको सवारी साधन हो । मोटरसाइकल चढ्ने आधाजसो उमेरसमूह युवा नै हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गर्ने र मोटरसाइकल चढेर कार्यक्रमस्थलमा पुग्ने क्रम बढेपछि सरकारले आन्दोलनमा सहभागिता घटाउनका लागि मोटरसाइकलमा जोर–बिजोर सिस्टम लागू गरेको स्रोत बताउँछ ।
मोटरसाइकलमा जोर–बिजोर लागू गर्दाको फाइदा
सर्वसाधारणको हकमा मोटरसाइकलमा जोर–बिजोर प्रणालीले कुनै फाइदा गरेको छैन । बजार तथा कार्यालयहरु खुलेको अवस्थामा आवतजावतका लागि प्रभावकारी माध्यमका रुपमा रहेको मोटरसाइकलमा चालकमात्र सवार हुन पाउने शर्तले नै कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई अन्त्य गर्दछ ।
त्यसैले कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले मोटरसाइकलमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिरहनुको अर्थ नरहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
मोटरसाइकलमा जोर–बिजोर लागू गर्दा सरकारलाई भने तत्काल फाइदा नै देखिन्छ । सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी हुने युवाको संख्या मोटरसाइकलमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्दा आधा कम हुने देखिन्छ ।
साविक बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका मोटरसाइकलको संख्या ९ लाखभन्दा बढी छ । तीमध्ये ६ लाख मोटरसाइकल मात्र चालु अवस्थामा रहेछन् भने पनि जोर–बिजोर प्रणालीका कारण ३ लाख मोटरसाइकलले एक दिन सञ्चालनका लागि अनुमति पाउँछन् ।
सरकारले यसअघि नै मोटरसाइकलमा दुई जना सवार हुन नपाउने नियम लागू गरिसकेको छ । दुई जना सवार हुन पाउँदा युवाद्वारा गरिएको सरकारविरोधी प्रदर्शनमै सहभागिता बढ्छ भनेर सरकारले मोटरसाइकलमा दुई जना सवार हुन नपाउने नियम लागू गरेको बताइन्छ । अन्यथा, एउटै परिवारका सदस्य घरमा सँगै खान–बस्न मिल्ने तर मोटरसाइकलमा एकसाथ सवार हुन नपाउने भन्ने नियम आफैंमा कोरोना संक्रमण रोकथामका सन्दर्भमा व्यवहारिक देखिदैँन ।
कोरोना संक्रमण सर्न सक्ने सम्भावनाका सन्दर्भमा मोटरसाइकलको तुलनामा अन्य सवारी साधन प्रयोग गर्नु त्यति सुरक्षित देखिदैँन । तर मोटरसाइकलमै पनि सरकारले जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्दा दैनिक कार्यालय आउ–जाउ गर्नुपर्ने कर्मचारी, पसल खोल्न जानुपर्ने व्यापारी, विभिन्न निकायमा कामको सिलसिलामा जानुपर्ने सेवाग्राही मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
के बजारबाट किनेर ल्याएको फलफुल तरकारीबाट कोरोना भाइरस सर्छ ?
कोरोना भाइरसको प्रकोप नेपालमा बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । अहिले सम्म भ्याक्सिनको प्रयोग नभइसकेको अवस्थामा कोभिड-१९ बाट बच्ने एउटा मात्र उपाय आफु संक्रमणबाट टाढा रहनु नै हो । त्येसको एउटा मात्र उपाए सामाजिक घुलमिल कम गर्नु र मास्क, सेनिटाइजर लगायतको सहि प्रयोग गर्नु नै हो । यस्तोमा धेरैले मास्क त प्रयोग गरिनै रहेका छन् । […]
एकैपटकमा ४ शिशु जन्माएपछि महिलाको मृत्यु
Posted on September 2, 2020 Author khabar silo
१७ भदौ, जनकपुरधाम । धनुषामा एक महिलाले एकै पटकमा चार बच्चाको जन्म दिएकी छन् । शिशु जन्मिएपछि ती महिलाको भने मृत्यु भएको छ । जिल्लाको विदेह नगरपालिका–७ जोगियारा टोलकी अमिरुल खातुनले जनकपुरधामस्थित काब्या अस्पतालमा मंगलबार राति १० बजेतिर शल्यक्रियामार्फत चार बच्चालाई जन्म दिएकी हुन् । बुधबार बिहानदेखि स्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको खातुनलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गर्ने […]
कोरोना समुदायमा सर्न थालेपछि यस्तो छ भक्तपुरको तयारी
Posted on August 28, 2020 Author khabar silo
भक्तपुर : जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि यसलाई रोक्न भक्तपुरमा तीव्र तयारी शुरु गरिएको छ। कोरोना विस्तारै समुदायमा पनि प्रवेश गरेपछि स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका र स्वास्थ्य संस्थाहरु सक्रिय भएका हुन्। जिल्लामा क्‍वारेन्टाइन, आइसोलेसनदेखि पिसिआर परीक्षणलाई समेत फराकिलो बनाउँदै सङ्क्रमण रोकथामका लागि नगरपालिकाहरुले आ-आफ्नो योजना ल्याएका छन्। भक्तपुर क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री […]
अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई लिएर ४ वटा जहाज नेपाल आउने
४५ वर्षपछि भारत-चीन सीमामा पहिलो पटक भारतीय सैनिकको मृत्यु
साउदीमा हुनुहुन्छ ? साउदी अरबको नयाँ नियमले नेपालीलाई यस्तो फाइदा
४ महिने बच्चाको यस्तो बि जोग,गर्ववती श्रीमती कु टेर श्रीमान फ रार (भिडियो हेर्नुस्)
इजरायल जान आवेदन दिएका २८ सयको कागजपत्र नक्कली
यी राशिका व्यक्तिले बुझेका हुन्छन् पैसाको महत्व, गर्दै गर्दैनन् फजुल खर्च